1 Makoronike 24:1-31
24 Zvino vanakomana vaAroni vaiva nemapoka avo. Vanakomana vaAroni vaiva Nadhabhi+ naAbhihu,+ Eriyezari+ naItamari.+ 2 Zvisinei, Nadhabhi naAbhihu+ vakatangira baba vavo kufa,+ havana kumbova nevanakomana, asi Eriyezari+ naItamari vakaramba vari vapristi. 3 Dhavhidhi naZadhoki+ wokuvanakomana vaEriyezari, naAhimereki+ wokuvanakomana vaItamari vakavakamura kuva mapoka nokuda kwenzvimbo dzavo mubasa ravo.+ 4 Asi vanakomana vaEriyezari vakawanikwa vaine vakuru vakawanda kupfuura vanakomana vaItamari. Naizvozvo vakakamura gumi nevatanhatu kuti vave vakuru vedzimba dzemadzibaba evanakomana vaEriyezari, uye vasere kuti vave vakuru vedzimba dzemadzibaba evanakomana vaItamari. 5 Vakavakamurawo vachishandisa mijenya,+ ava neavo, nokuti pavanakomana vaEriyezari nepavanakomana vaItamari paifanira kuva nevakuru venzvimbo tsvene+ nevakuru vaMwari wechokwadi. 6 Shemaya mwanakomana waNetaneri munyori+ wevaRevhi akabva avanyora ari pamberi pamambo nemachinda nomupristi Zadhoki+ naAhimereki+ mwanakomana waAbhiyatari+ nevakuru vemadzibaba evapristi neevaRevhi,+ imba imwe chete yemadzibaba ichisarudzwa nokuda kwaEriyezari+ uye imwe chete ichisarudzwa nokuda kwaItamari.+ 7 Zvino mujenya wakakandwa: wokutanga wakabata Jehoyaribhi;+ wechipiri Jedhaya, 8 wechitatu Harimu, wechina Seorimu, 9 wechishanu Marikija, wechitanhatu Mijamini, 10 wechinomwe Hakozi, wechisere Abhija,+ 11 wechipfumbamwe Jeshua, wechigumi Shekaniya, 12 wechigumi nomumwe chete Eriyashibhi, wechigumi nemiviri Jakimu, 13 wechigumi nemitatu Hupa, wechigumi nemina Jeshebhiyabhi, 14 wechigumi nemishanu Bhiriga, wechigumi nemitanhatu Imeri, 15 wechigumi neminomwe Heziri, wechigumi nemisere Hapizezi, 16 wechigumi nemipfumbamwe Petahiya, wechimakumi maviri Jehezikeri, 17 wechimakumi maviri nomumwe chete Jakini, wechimakumi maviri nemiviri Gamuri, 18 wechimakumi maviri nemitatu Dheraya, wechimakumi maviri nemina Maaziya. 19 Idzi ndidzo dzaiva nzvimbo dzavo+ pabasa ravo,+ rokupinda muimba yaJehovha maererano nekodzero yavo+ yavakanga vapiwa natateguru wavo Aroni, sezvaakanga arayirwa naJehovha Mwari waIsraeri. 20 Pavanakomana vaRevhi vakanga vasara, pavanakomana vaAmramu+ paiva naShubhaeri;+ pavanakomana vaShubhaeri, paiva naJedheya; 21 vaRehabhiya:+ pavanakomana vaRehabhiya, paiva naIshiya aiva mukuru; 22 pavaIzihari,+ paiva naSheromoti;+ pavanakomana vaSheromoti, paiva naJahati; 23 pavanakomana vaHebroni,+ paiva naJeriya+ aiva mukuru, Amariya ari wechipiri, Jahazieri ari wechitatu, Jekameyamu ari wechina. 24 Vanakomana vaUzieri, Mika; pavanakomana vaMika,+ paiva naShamiri. 25 Hama yaMika yaiva Ishiya; pavanakomana vaIshiya, paiva naZekariya. 26 Vanakomana vaMerari+ vaiva Mari+ naMushi;+ vanakomana vaJaaziya, Bheno. 27 Vanakomana vaMerari vaiva: VaJaaziya, Bheno naShohamu naZakuri naIbri. 28 VaMari vaiva, Eriyezari, asina kumbova nevanakomana.+ 29 VaKishi: vanakomana vaKishi vaiva Jerameeri. 30 Vanakomana vaMushi vaiva Mari+ naEdheri naJerimoti.+ Ava ndivo vaiva vanakomana vevaRevhi maererano nedzimba dzemadzibaba+ avo. 31 Vakakandawo mijenya+ sezvakangoitwa nehama dzavo vanakomana vaAroni vari pamberi pamambo Dhavhidhi naZadhoki naAhimereki nevakuru vedzimba dzemadzibaba evapristi neevaRevhi. Kana dziri dzimba dzemadzibaba,+ mukuru akanga akangoita somunun’una wake.